တိုဂဲစွတ်ခရော ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
ရုပ်ရှင်နဲ့ တီဗွီဇာတ်လမ်းရိုက်ကွင်းတွေမှာ များစွာအသုံးပြုထားတဲ့ ကျိုတို . အာရရှိတောင်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလမှာ ( ကျိုတို. အာရရှိတောင် ပန်းမီးခွက် ) ဆိုတဲ့ ပွဲတော်ရှိပြီး မီးထွန်းထားပါတယ်။
Kyōtofu kyōtoshiukyōku Saga
နှစ်တိုင်း နိုဝင်ဘာလ ၂ ကြိမ်မြောက် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ( အာရရှိတောင်မိုမိဂျိပွဲတော် ) တိုဂဲစွတ်တံတား အပေါ်တလျှောက်မှာ ကျင်းပပါတယ်။
Hankyū `ranzanဘူတာ ဆင်းပြီးနောက် ၇ မိနစ် လမ်းလျှောက်
Keifuku dentetsu `ranzanဘူတာ ဆင်းပြီးနောက် ၄ မိနစ် လမ်းလျှောက်
JR San'inhonsen `saga arashiyamaဘူတာ ဆင်းပြီးနောက် ၁၂ မိနစ် လမ်းလျှောက်